နေအိမ် / ဘရာဇီးအနုညာတစီရင်ဘို့မော်ကွန်း
13/01/2018 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
တွင် 2015, ရေခြားမြေခြားဘရာဇီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့၏စီးပွါး၏ရလဒ်အဖြစ်, ဘရာဇီးအစိုးရ, ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တိုင်ပင်, ဒါခေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်နည်းပြရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်များအသေးစိတ်ရှင်းလင်း (“CFIA”s ကို - သို့မဟုတ် “acfir” ယင်း၏ပေါ်တူဂီအတိုကောက်အတွက်). အဆိုပါ CFIA ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စတိတ်များအကြားအပြန်အလှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအဆင်ပြေချောမွေ့နှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့ဖြစ်တယ်, အထူးသဖြင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ကဏ္ဍများတွင်, အဆိုပါအပြန်အလှန်တူသောအများကြီး […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, ဘရာဇီးအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန
30/11/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
နိဒါန်းအတော်များများကြောင်းခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုနောက်ခံစာချုပ်တစ်ခုခုံသမာဓိအပိုဒ်၏မရှိခြင်းအတွက်လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေများမှာနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်. ဒီအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်းလမ်းသက်သက်ကြည်ကြည်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုစတင်ရန်နိုင်စွမ်းသည့်ပါတီများ '' အလိုတော်အပေါ်သီးသန့်မူတည်. လိုအပ်သောအလိုတော် (သို့မဟုတ်ခုံသမာဓိသဘောတူ) မကြာခဏဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မအမြဲ, ဝိုငျး […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဘရာဇီးအနုညာတစီရင်
28/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဘရာဇီးတွင်အနုညာတစီရင်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်သိသိသာသာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်. ယခုနှစ်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် ICC ကစာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာ 2016 ခုံသမာဓိကို အသုံးပြု. ဘရာဇီးပါတီများတစ်ခုတိုးပွားလာပြသ, နှင့် 123 နှိုင်းယှဉ်ဘရာဇီးပါတီများ 112 တွင် 2014, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပါတီ-အဆင့်အတွက် 3rd အရပျ၌ဘရာဇီးအားမရ. ဘရာဇီးတစ်လိုလားသူခုံသမာဓိဥပဒေရေးရာစစ်အစိုးရကရှိခြင်းနှင့်အဖြစ်ဖော်ပြယနေ့ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ပလပ်ခြင်း, အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, ဘရာဇီးအနုညာတစီရင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး
ခုံသမာဓိနှင့် Rico တောင်းဆိုမှုများ: ICC ကပြဿနာ N ကနောက်ဆုံး Awards. 6320 (1992)
04/06/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဤသည် ICC ကခုံသမာဓိစိုးရိမ်ပူပန်မှုများခုံသမာဓိများနှင့် Rico တောင်းဆိုမှုများ, ဘရာဇီး built-in အပင်တစ်ပင်၏အခြေအနေတွင်ပေါ်ပေါက်. နောက်ခံစကားမစပ်, တစ်စာချုပ်ထဲမှာသို့ဝငျခဲ့သညျ 1972. အဆိုပါစာချုပ်ဘရာဇီးပညတ်တရားအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်နှင့်ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံပဲရစ်ဖြစ်ဖို့သဘောတူခဲ့သည်. အဆိုပါပါတီများ, Furnas, ဘရာဇီးကုမ္ပဏီ (တောင်းဆိုသူ) နှင့်တစ်ဦး […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ဘရာဇီးအနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး, ICC ကအနုညာတစီရင်